Ngo izinzuzo lowesifazane kusezingeni ukhangwa abesilisa, esifubeni ithatha endaweni yokuqala. libanjwe Petite, ngifuna aphume i neckline evulekile, ushiya akekho ngabandayo. Okufanele ukwenze uma wakho usayizi webele elincane? Uyoya kosizo ubhodisi push-up.
Abesilisa lucky bangakwazi ngosizo umsebenzi ukwandisa imisipha pectoral. Nyusa ivolumu webele sowesifazane ngakho akunakwenzeka. Ukudla iklabishi nazo zonke izinhlobo zezinsimbi zobuchwepheshe, futhi, ngeke kube umphumela. It uhlala kuphela ukuhlinzwa isikhumba. Kodwa ungagijimi kudokotela, ngoba inkinga zingaxazululwa ngaphandle kwegazi. Kuyinto kudingekile kuphela ukukhetha ubhodisi kwesokudla push-up.
Hlobo luni ubhodisi?
Khumbula, njengoba amantombazane asakhula kakade kufana nokuthi uzama ukwandisa isifuba ngokusebenzisa ezihlukahlukene ifaka ubhodisi wakhe. Esikhathini course uvolo scarves, izindwangu, amasokisi. Kungani kunjalo excel, uma kukhona ubhodisi push-up?
Push up bra uyakwazi ukuthi siphakamise esifubeni, ayinike ukuma kamnandi Ukwenyuka okukhulu. Konke lokhu kungenxa Sibonga kungenzeka ukuba ukuncishiselwa ekhethekile futhi umbhangqwana izimfihlo ngaphezulu.
Uma uhlobo uye bancishwa wena Ngokugobekile noku, amabele elahlekile ukuma ngemva kokubeletha noma kwesisindo, khona-ke Kuyaphuthuma ubhodisi isimangaliso. Futhi, lena godsend yangempela kulabo ngesizathu esisodwa noma kwenye esifubeni letingemasayizi lahlukene.
Umsunguli lokuqala ubhodisi lizokhuphuka Wonderbra baba brand. Namuhla-ke ingenye abaholi ekukhiqizeni zangaphansi. Ukuthenga Bras brand aseYurophu, wena cishe okuzivikela ukuthenga abampofu. Uma elicwengisiswe Lingerie you cha ngakhokhela, ungakwazi engqondweni, ube umkhiqizo Milavitsa. It Brás ekhiqizwa Belarus, ezithinta eliphezulu futhi amanani ezingabizi.
Lapho ubhodisi push-up sithuthukisa esifubeni?
Zonke Bras le imodeli abe aminyene Foam inkomishi. It kakade unikeza webele elihle ukuma kanye nezinhlamvu zayo. Ngaphezu kwalokho, wonke ezivuzayo nemigqa zenzelwe ukwakha induduzo ngokudayisa yakho futhi zibukeke kwandisa umthamo yayo.
Ubujamo inkomishi uhlale nengxenye evulekile, okwenza kube nokwenzeka ukuze adalule okuyingxenye phezulu webele futhi bawakhohlise yobukhulu non-ezincane. Kodwa imfihlo main - kungcono zonke izinhlobo ifaka, okungase tente Ubukhulu ezimbili by izintelezi yakho. Ngakho-ke, empeleni, ibizwa ngokuthi zangaphansi futhi ubhodisi push-up. Izithombe amantombazane ubhodisi evamile futhi lizokhuphuka mikhumbi ibonisa ngokucacile umehluko okukhulu.
Abanye abesifazane ukuzama ukwandisa ivolumu amabele zibukeke ngenxa ezincane Usayizi ubhodisi. Kakhulu musa batusa lokhu. Okokuqala, kuyingozi empilweni, ngoba ubhodisi encane licindezele esifubeni, okuyinto igcwele nemiphumela emibi ngendlela efanayo. Okwesibili, ungatholi kube nomphumela omuhle kakhulu. Chest akuyona sexy ukubheka aphume izinkomishi, futhi umane iwe kubo. Ezinhlangothini emphethweni akhiwa futhi ezizibeni wagxila ubuhlungu esikhunjeni. Zama ngaso sonke isikhathi ukunquma usayizi zangaphansi kuphela.
Izinhlobo push up Bras
Ukuphonsela Bras zihlukile kuye imisebenzi yabo. Khetha imodeli ukuthi ikufanele wena.
Bra amagwebu izinkomishi. Uma weneliseka ngokuphelele usayizi webele, kodwa ongathanda lona umumo nice kancane waphakamisa ke le ndlela - okudingayo.
Bra nge ifaka esikhiphekayo. Ngo indebe kukhona ephaketheni, kanye ephelele, uzothola Foam pads. Lemisebenti ingaphindze uthenge ngokwehlukana. Ungakwazi ulungise ubukhulu ngokudayisa, kuye ukugcwala bra wakhe. Kubaluleke kakhulu futhi kulula nokulinganisa ubukhulu ngokungalingani amabele amabili.
Bra ne abicah yamathebhu. Lena kukho olukhulu a Swimsuit, ngoba abicah engakutholi ezimanzi. Lezi ifaka zingathengwa eceleni.
Ukulungiswa ubhodisi. Lonke inkomishi ligcwele Foam impahla. Lokhu ubhodisi kufanelekile ubuhle amancane kakhulu. Uyakwazi ukunikeza roundness eziyengayo ngisho ubukhulu kulencane webele.
Indlela ukukhetha ibhande sowesifazane?